e-waste ခေါ်တဲ့ e-စွန့်ပစ်ပစ္စည်း - Myanmar Network
e-waste ခေါ်တဲ့ e-စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
Posted by Language Republic on January 30, 2015 at 10:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မိတ်ဆွေရဲ့ အိမ်ကမိသားစုဝင်တွေရဲ့ လက်ရှိကိုင်နေတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းအားလုံး ပေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်နှစ်လုံးရှိပါသလဲ။ မော်ဒယ်အောက်သွားလို့ မသုံးတော့တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း handset တွေရော ဘယ်နှစ်လုံးရှိပါသလဲ။ ဟုတ်ကဲ့။ အရှိန်အဟုန် ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာများနဲ့အတူ လူတိုင်းနီးပါးလက်လှမ်းမှီတဲ့ ဈေးတွေနဲ့ ဝင်လာတဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဟာ ကျေးလက်ဒေသများအထိ လျှင်မြန်စွာ ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဟာ ကာလတိုအတွင်း အသစ်သစ်ပေါ်လာတဲ့ မော်ဒယ်တွေနဲ့ စားသုံးသူကိုအမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက mobile phone တွေကတော့ အထင်ရှားဆုံးသာဓကပါဘဲ။ Sim card တွေကလည်း အရင်ကလို ရှားပါးပစ္စည်းမဟုတ်တော့တဲ့ အပြင် ကလေးမုန့်ဘိုးသာသာ ပိုက်ဆံနဲ့တောင် ဝယ်လို့ ရပြီဆိုတော့ အဲ့ဒါနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ handset တွေရဲ့ ဝယ်လိုအား ကလည်း နေ့ချင်းညချင်း တက်လာပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါ။ တီဗွီတွေ၊ ကွန်ပျူတာ မော်နီတာတွေ ဆိုရင်လည်း အရင်က သေတ္တာပုံးကြီး ပုံစံတွေအစား ပြားပြားချပ်ချပ် LCD၊ LED မော်နီတာတွေ၊ တီဗွီတွေကနေရာယူခဲ့ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် အရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ တီဗွီအဟောင်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာမော်နီတာအဟောင်းတွေ၊ ဖုန်းအဟောင်းတွေ၊ ကက်ဆက်တွေ စတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်ရောက် ကုန်ပါသလဲ။ အဲ့ဒါတွေကရော ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုပါသလာွး၊ ဒုက္ခပေးပါသလားဆိုတာမိတ်ဆွေ စဉ်းစားဖူးပါသလား။ အဲ့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို e-waste လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Used electronic devices such as mobile phones, computers, televisions, etc. that have been thrown away are referred to as e-waste or electronic waste.
e-waste စကားလုံးပေါ်ပေါက်လာပုံက electronic waste ကိုအတိုကောက် e-waste လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း လက်ရှိအင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား မှာ နေရာရပြီးဖြစ်တဲ့ e-mail, e-commerce, e-learning စသည်ဖြင့် "e-" prefix ကိုသုံးတဲ့ နမူနာယူပြီး ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ကွဲပြားခြားနားချက် ကတော့ e-waste ရဲ့ ‘e-prefix’ က တစ်ကယ့် လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန် (electricity နဲ့ electrical parts) တွေက်ိုညွှန်းတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ စကားလုံးတွေ ရဲ့ ‘e-prefix’ က (internet) ကိုညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ က စတင်ပြီး ယူကေနိုင်ငံမှာ ရုပ်မြင်သံကြားထုပ်လွှင့်တဲ့ စနစ်ကို analogue ကနေ digital ကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နောက်မှာ analogue TV တွေ အမြောက်အများ သုံးမရအောင်ကို အလကား ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေက digital TV အသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးရာကနေ သိန်းသန်းတဲ့ “dead” television တွေဟာ e-waste တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာအကြီးစားတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
e-waste ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ပေါ်ပြူလာ ခေတ်သုံးစကားလုံး buzz word ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကစွန့်ပစ် အိမ်သုံး လျှပ်စစ် ပစ္စည်းလို့ အလွယ်မှတ်လို့ ရပြီး UN အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တစ်နှစ်ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကထွက်ရှိတဲ့ e-waste တွေက ခန့်မှန်းတန်ချိန် သန်းပေါင်း ၅၀ တောင်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းတာကလည်း e-waste တွေ ပိုထွက်လာဖို့ တွန်းအားပေးသလို ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Electronic waste or e-waste, isagrowing problem at college campuses across the nation. As more and more computers, printers, monitors and other electronic items break down or become outmoded, questions often arise as to where to put this equipment, which often contains materials that are not biodegradable and sometimes toxic.
e-waste ရဲ့ အဓိက အများဆုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကတော့ ကွန်ပျူတာ၊ တယ်လီဗေးရှင်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ လျှပ်စစ်ဂိမ်းစက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ မော်ဒယ်သက်တမ်းက တိုတောင်းလှသမို့ မော်ဒယ်အသစ်တွေ ထွက်ပြီးရင်းထွက်ရင်း စားသုံးသူတွေက latest techonology ကို upgrade လိုက်လုပ်ရာကနေ e-waste တွေ တိုးရရင်း အကြောင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ လျှပ်စစ် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ manufacturer တွေက သူတို့ ထုပ်လုပ်မဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ သက်တမ်းကို ဈေးကွက်မှာ မိတ်မဆက်ခင်ထဲက ကြိုတင် သတ်မှတ် ပြီးသားပါ။ အဲ့ဒီလိုသက်တမ်း ကြိုတွက်တာက်ိုplanned obsolescence လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ထပ် model မြင့်ပစ္စည်း ကိုဘယ်အချိန် ထပ်ပြီးဈေးကွက်မှာ မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်စီစဉ် ထားပြီးသားပါ။ iphone series တွေကိုဘဲနမူနာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
e-waste ပြဿနာက အခုအခါ ကြီးထွားလာပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက ဖြစ်သလိုစွန့်ပစ်လို့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုစွန့်ပစ်ရင် toxic rubbish ဆိုတဲ့ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ခဲ(lead) ၊ မာကျူရီ(mercury) ၊ ကက်ဒမီယံ(cadmium)စတဲ့ ဓါတ်တွေပါတဲ့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့သတ္ထုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လေထုနဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာရှိ အစိုးရတွေဟာ e-waste ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတားမြစ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ထုပ်ပြန်ပြီး ပြန်လည် အသုံးပြု ‘recycle’ လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေ ထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂ္ဂ္ဂ European Union နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုပ်လုပ်တဲ့ manufacturer တွေကို မိမိရဲ့ထုတ် ကုန် ဈေးကွက်ထဲမှာ သက်တမ်းကုန်တဲ့အခါ (end of life ဖြစ်တဲ့အခါ) မိမိရဲ့ ထုတ်ကုန် အပေါ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် တာဝန်ယူပြီး recycle ပြန်လုပ်ခြင်းဖြင့် ‘greener’ product တွေ ပြန်ထုပ်လုပ်စေပြီး e-waste ပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။ အခုဆိုရင် အထူးသဖြင့် လူဦးရေထူထပ် သိပ်သည်းတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွေ ကို (အနောက်နိုင်ငံတွေက) တင်ပို့မည့် လျှပ်စစ် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ် electronic waste မူဝါဒတွေ ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် ချပြီး လုပ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ e-waste လျှော့ချရေး မူဝါဒကိုလိုက်ပြီး New Zealand နိုင်ငံကလည်း သူ့နိုင်ငံတွင်းမှာ e-waste တွေရဲ့ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် အန္တရာယ် potential dangers အကြောင်း အများပြည်သူတွေကို အသိပညာ ပြန့်ပွားပေးပြီး e-waste တွေကိုပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးအောင်စွန့်ပစ်နည်း environmentally-friendly way နဲ့ စွန့်ပစ်ကြဖို့ လှုံ့ဆော်ရေးကို ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကို e-day လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
“electronic data” လို့ ခေါ်တွင်တဲ့ “e”prefix ကို ၁၉၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်က internet ပေါ်ကနေသုံးတဲ့ mail ကို e-mail ဟုခေါ်တွင် သုံးစွဲရာမှ စတင်ပြီးနောက်ပိုင်း ယနေ့ခေတ်အထိပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာတွေအလိုက် “e”prefix တပ်ပြီးနာမည်တွေ ပေးလာကြပါတယ်။
ရဲရဲ ပြောပါ မကြောက်ပါနဲ့
Permalink Reply by khaing lay on February 1, 2015 at 12:18
I get knowledge this word so I like it. I don't knowewaste .Now I know .Thank you so much.
Permalink Reply by Aung Aung Myint Oo on January 26, 2016 at 12:10